Abahlobo abatyeleleyo kunye nezihlobo ziya kuqhuba ukubuyela kwakhona kuhambo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Abahlobo abatyeleleyo kunye nezihlobo ziya kuqhuba ukubuyela kwakhona kuhambo
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ukundwendwela abahlobo kunye nezihlobo ziya kudlala indima ebalulekileyo ekubuyiseleni uhambo ngokuhamba kwezigidi ezingama-242 zamazwe aphesheya kulindeleke ukuba zithathwe ngenxa yesi sizathu ngowama-2025.
Ukundwendwela abahlobo kunye nezihlobo (VFR) zokuhamba kuya kuba namava okukhula okuphezulu.
I-VFR yayiyeyona yesibini iholide yathathwa ngo-2019.
I-242 yezigidi ze-VFR zokuhamba kulindeleke ukuba zithathwe ngo-2025.
Iindawo zokuhamba zinokukhupha ii-visa ezikhethekileyo okanye iimfuno eziza kwenza kube lula ukuba iintsapho ziphinde zimanyane
Uqikelelo lweengcali zeshishini lokuhamba lubonisa ukuba utyelelo lwabahlobo kunye nezihlobo (VFR) ziya kuba namava okukhula okuphezulu, nge-17% yenqanaba lokukhula lonyaka (CAGR) phakathi ko-2021-25, xa kuthelekiswa nokuzonwabisa, kukhula nge-16.4% ukunyuka phakathi kwexesha elifanayo ixesha.
Ngelixa i-VFR ingazukugqitha kwinani leendawo zokuzonwabisa zamazwe aphesheya, izakudlala indima ebalulekileyo ekuvuseleleni uhambo ngokuhamba kwezigidi ezingama-242 zamazwe aphesheya kulindeleke ukuba zithathwe ngenxa yesi sizathu ngowama-2025.
I-VFR yayiyeyesibini kuthathwe iholide ngo-2019 ngabaphenduli behlabathi (46%) kuvavanyo lwabathengi lwe-Q3 2019. Kwakuyesibini kuphela 'elangeni naselwandle' (58%).
Nangona unyaka wezithintelo zokuhamba kunye nexesha elininzi ekhaya kunokuthetha ukuba umnqweno welanga, ulwandle kunye neholide yesanti uya kuba namandla, ukutyelela usapho kunye nabahlobo kunokuba yinto ephambili kubantu abaninzi ngoku.
Kwiimarike ezithile zomthombo ikwayesona sizathu sithandwayo sokuhamba, nge-53% yabahambi kwi i-USA ukubeka phambili olu hlobo lohambo, kulandele Ostreliya (52%), Khanada (49%), Indiya (64%) kwaye ISaudi Arabia (60%).
Uphando lwakutsha nje luveze ukuba i-83% yabaphenduli behlabathi 'yayigqithise', 'kakhulu' okanye 'kancinci' bexhalabile malunga nezithintelo ekuhlaleni nabahlobo kunye nosapho. Amaqonga anje ngoZoom, uFacebook noWhatsApp anike abathengi ithuba lokudibana phantse, kodwa oku akufani ncam nokwamkela ilungu losapho okanye ukuhlala phantsi ngokufanelekileyo.
Ngeli xesha lobhubhani, imibutho yezokhenketho neyokhenketho kwihlabathi liphela icele ukuba eli candelo 'lidibane' kwakhona. Injongo yazo zombini iindawo zokufikela kunye namashishini ezokhenketho kungoku nje kukudibanisa iintsapho emva konyaka uthintelo lokuhamba kumazwe aphesheya.
Iindawo ekuyiwa kuzo zinokukhupha ii-visa ezikhethekileyo okanye iimfuno eziya kwenza kube lula ukuba iintsapho ziphinde zimanyane. Iinqwelo-moya zinokuqinisekisa ukuba iindlela ezidumileyo ze-VFR zezinye zezinto zokuqala ukubuyiselwa, amashishini okubuka iindwendwe kunye nabaqhubi abanomtsalane banokubonelela ngenkuthazo kunye nezaphulelo kwiintsapho. Onke amashishini kwicandelo lokuhamba anokufumana ulwazi olungcono lokuqonda ngakumbi le ntengiso yezokhenketho.